Momba anay - Taizhou Huangyan Shentuo Vehicle Co., Ltd.
Ny orinasa dia miavaka amin'ny famolavolana, fanaingoana ary fanamboarana fitaratra ho an'ny fiara bateria moto. Miaraka amin'ny fampivoarana ny teknolojia, ny orinasantsika dia mampiasa ny fahaizantsika manamboatra, namolavola ireo mpitatitra aoriana ho an'ny moto sy scooter, ary ny faritra ho an'ny moto. Afaka mamokatra ny mason-drivotra amin'ny hateviny, endrika, fitaovana ary loko hafa izahay. Windscreens dia natao manakaiky ireo famaritana tany am-boalohany (OEM) mba hiantohana tsara amin'ny môtô sy scooter-nao.
IBX dia marika an'ny Taizhou Huangyan Shentuo Vehicle Co., Ltd. Taizhou Shentuo Vehicle Co., Ltd. dia naorina tamin'ny 1998 ary manana traikefa 20 taona mahery. Manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana fitaratra fitaratra ho an'ny moto sy fiara bateria. Izy io dia manana traikefa amin'ny famokarana manankarena sy teknolojia mitarika. Fantatra amin'ny hatsarany, ny vidiny mifaninana ary ny hafainganam-pandehan'izy ireo mahomby.
Nandritra ny taona maro, ny vokarinay dia nivarotra tsara tany Eropa sy Amerika. Ny vokatra dia noraisin'ny mpanjifa tsara. Hanao ny tsara indrindra vitantsika izahay amin'ny fanantenana fa afaka mitondra anao ny traikefa fiantsenana tsara indrindra sy ny vokatra kalitao tsara indrindra. Ho fanampin'izay, manaiky baiko sy teny nindramina avy amin'ny mpanjifa iraisam-pirenena rehetra izahay. Manohana ny antsinjarany sy ny ambongadiny ny vokatra.
Momba ny Customize
Varotra sy ambongadiny
Safidy loko sy fitaovana
Torolàlana namboarina: Mila manome sary an-tsary marina ianao, santionana fitaratra na moto. Mifandraisa aminay mba hampahafantatra anay ny momba ny fitaovana, ny fombany, ny lokony ary ny habetsaky ny vokatra nohafaranay .Ny mpiasa teknika eto aminay dia hanao kajy ny teny nindramina haingana araka izay azo atao ho anao. Tsara ny manamarika fa ny vokatra sasany dia mitaky ny fampandrosoana ny bobongolo, ary ny sarany ilaina amin'ny fitaovana marokorotana ilaina. Manome anao serivisy namboarina izahay hihaona amin'ny safidinao rehetra.
Fotoana namboarina ： tapa-bolana
Torolàlana momba ny varotra: Raha hijery fampahalalana amin'ny antsipirian'ny vokatra sy ny vidiny, kitiho ny tsanganana amin'ny tranokala. Raha mila vokatra bebe kokoa sy fanontaniana dia araho izahay amin'ny Facebook, Intagram ary Twitter. Omeo serivisy iray taona aorian'ny fivarotana, fanoloana maimaim-poana ny vokatra simba ao anatin'ny herintaona. Tena matoky ny vokatra izahay ary mino fa afaka manome anao traikefa fiantsenana kalitao.
Torolàlana momba ny fiaraha-miasa raharaham-barotra: Azafady mifandraisa aminay, azonao atao ny mahazo fampahalalana momba ny vokatra sy ny vidiny tiana kokoa, ho tonga mpamatsy anao indrindra izahay.
Fisafidianana loko: Misy loko maro hisafidianana. Tsara ny manamarika fa ny avo lenta ny fitaratra dia tsy milaza ny fampiasana takelaka miloko (Brown, Black, Smoky grey, Transparent, Fluorescent yellow, Orange)
PC, polycarbonate mihamafy） ： Misafidiana fitaovana polycarbonate mihamafy kalitao avo lenta, izay manana hamafisana lehibe, fanoherana ny oksizena, faharetana ary tsy mora tapaka. Ny tsara indrindra amin'ireo fitaovana telo.
PMMA, acrylic misy fiantraikany anatiny） ： Ny acrylic misy fiantraikany anatiny dia voafantina, izay manana hamafin'ny avo kokoa sy kalitao tsara kokoa noho ny acrylic tsotra. Mazava ny zoro ny fitaratra ary novonoina ho mpanjaka izy io.
PVC ： Manintona somary malefaka, marefo, tsy aroso, fa mora ny vidiny ..
Orinasa sy mari-pankasitrahana
Vokatra asongadina - Sitemap Pedalin'ny gazy moto, Tongotra môtô fisaka, Vespa Gts Gtv 300 Atraketraky ny kitapo, Windshield an'ny Honda Nmax, Kitapo ho an'ny sekolin'i Kawasaki, Vespa Gts 300 Gtv fitoeran-kitapo,